Posted by မိုးကုတ်မီဒီယာ at 9:50 AM
ကျွန်တော်က သဟာယစာကြည့်တိုက်မှာ ၇တန်းကနေ ၁၀တန်းထိ လုပ်အားပေးခဲ့ဖူးပါတယ်။ အားလုံးချစ်ချစ်ခင်ခင် စည်းစည်းလုံးလုံးနဲ့
သိပ်ကို ပျော်စရာကောင်းတာပေါ့ဗျာ။ အခုတော့ ဇာတိမြို့ကလေးနဲ့ ဝေးကွာနေရတာ ၆ နှစ်ကျော်သွားပြီဗျာ။ သဟာယ စာကြည့်တိုက်က
တဖွဲ့သားလုံးကို အမြဲတစေ လွမ်းဆွတ်သတိရနေပါတယ်ဗျာ။ အခုဆိုရင် စာပေဆုတွေတောင်ပေးနေပြီဆိုတော့ ဂုဏ်ယူတယ်ဗျာ။
မုဒိတာလည်းပွားမိတယ်ဗျာ။ ကျွန်တော်လည်း တတ်နိုင်သလောက် ကူညီမယ်ဗျာ။ တဖွဲ့သားလုံးပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ကြပါစေခင်ဗျာ။
လေးဇော်ဝင်း၊ ဦးဌေးမောင်၊ ကိုသန်းထွေး၊ ကိုဝင်းသန်းဆွေတို့ရေ ဒီကွန့်မန့်လေးကို ဖတ်မိရင် ကျွန်တော့်ကို ဆက်သွယ်ကြပါဦးဗျ။
ဆရာဦးသက်ဦးဆီမှာလည်း ကျွန်တော့်လိပ်စာ ရှိတယ်ဗျ။
ကိုသားဖြူရေ အပူကပ်ရဦးမယ်ဗျ။ အလုပ်များနေရင်ခွင့်လွှတ်ပါနော..။ ကျွန်တော့်ကို လိုအပ်တာလေးတွေလည်း အကြံပေး
ပါဦး။ ဒီလိုဗျ..။ သဟာယစာကြည့်တိုက်အတွက် အွန်လိုင်းမှာ ပထမခြေလှမ်းအနေနဲ့ အရင်ဆုံး သဟာယစာကြည့်တိုက်ဆိုပြီး
ဘလော့တစ်ခုလုပ်ရင် ကောင်းမလားလို့။ နောက်အရှိန်ရလာလို့၊ စာကြည့်တိုက်အနေနဲ့လည်း နက်ကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်သုံးလာနိုင်တဲ့အခါကျရင်
ဒိုမိန်းဝယ်သင့်တယ်ဆိုရင်လည်း ၀ယ်လိုက်မယ်ဗျ။ အခုဘလော့မှာတော့ စာကြည့်တိုက်စဖြစ်လာပုံတွေ စာအုပ်အကြောင်းတွေ
လက်ရှိလုပ်နေတာတွေ တင်မယ်ဗျ။ စာကြည့်တိုက်မှာ နံရံကပ်စာစောင်တွေ လုပ်တဲ့အခါကျတော့လည်း အွန်လိုင်းအနေနဲ့ ဘလော့မှာ အချိန်နဲ့ တပြေးညီ ပြန်ပြီးတော့ ဖော်ပြမယ်ဗျ။ တခြားကောင်းနိုးရာရာ အစီအစဉ်တွေပေါ့ဗျာ။ စာကြည့်တိုက်က ဦးလေးတွေ အကိုတွေနဲ့လည်း တိုင်ပင်ပြီး သူတို့လုပ်စေချင်တာ၊ဖြစ်စေချင်တာ စိတ်ကူးမိတာတွေကို တင်ပေးမယ်ဗျာ။ အခြားစဉ်းးစားထားတာလေးတွေလည်းရှိသေးတယ်ဗျ။ အဓိကကတော့ဗျာ ကျွန်တော်တို့ စာကြည့်တိုက်က လုပ်တာကိုင်တာ
ဆောင်ရွက်နေတာတွေကို အွန်လိုင်းမီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ နည်းနည်းပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဗျာ ပိုပြီးတော့ ကျယ်ပြန့်စေချင်လို့ပါ။
အခု ဒီမှာ နက်သုံးရတာတော့ အဆင်ပြေပါတယ်ဗျ။ စာကြည့်တိုက်က ပေးပို့လာတဲ့ သတင်းတွေ၊ အချက်အလက်တွေ စာမူတွေကို အမြဲတမ်း အတ်ဒိတ်ဖြစ်နေအောင် တင်ပေးမယ်ဗျ။ တကယ်လို့ မိုးကုတ်မှာလည်း နက်သုံးရတာ အဆင်ပြေတယ်၊ စာကြည့်တိုက်ကနေ လတ်လတ်ဆတ်ဆတ် ပို့စ်တွေ တင်ချင်ရင်လည်း အဆင်ပြေအောင် စာကြည့်တိုက်ကိုလည်း PW ပေးထားမယ်ဗျ။ ဒီလိုနဲ့ တဖြေးဖြေး အရှိန်ရလာရင် တခြားနိုင်ငံက စာကြည့်တိုက်ကြီးတွေလို အွန်လိုင်းနဲ့ အော့ဖ်လိုင်း တပြေးညီ ချိတ်ဆက်မိသွားတာပေါ့ဗျာ။ ဟဲ..ဟဲ ကျွန်တော်စိတ်ကူးယဉ်ကြည့်လိုက်တာ 
အဲဒါဗျာ ကျွန်တော်တွေးမိတာလေးတွေ ကိုသားဖြူလည်း လိုအပ်တာကို အကြံပေးပါဦးဗျ။ စာကြည့်တိုက်ကို စာရေးရင် ကြာမှာဗျ။ ဒါကြောင့်မို့ ဒီမှာပဲ ကွန့်မန့်ဆွဲလိုက်တာ ခွင့်လွှတ်ပါဗျာ ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျ။ ကိုသားဖြူ အနောက်ပိုင်းကို
ရောက်ဖြစ်ရင်လည်း စာကြည့်တိုက်ကို ဒါလေး အသိပေး,ပေးပါဦးဗျ။ စာကြည့်တိုက်က ခွင့်ပြုတာနဲ့ သူတို့လုပ်စေချင်တဲ့
ဂိုက်လိုင်းအတိုင်းပဲ ကျွန်တော် သဟာယ ဘလော့စလုပ်လိုက်မယ်။ ပြီးတော့ စာကြည့်တိုက်ကိုလည်း PW ပေးထားမယ်ဗျ။
သင့်တော်၏ မသင့်တော်၏ အချိန်မရွေး စစ်ဆေးလို့ရအောင်ပေါ့။ အွန်လိုင်းမှာလည်းတင်မယ်တဲ့ဆိုတော့ ဘာရယ်မဟုတ်ဘူး
နံရံကပ်စာစောင်လုပ်တဲ့အခါ စာမူတွေပိုရတာပေါ့ဗျာ ကျွန်တော်တို့ တ၀ကြီးဖတ်ရတာပေါ့ :D
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျ။ တဖွဲ့သားလုံး ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ကြပါစေခင်ဗျာ။
I visite Myanmar in 2004.
You will find foto's on my blog :
I will com back to Myanmar.
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုသားဖြူရေ mogokmedia ကိုလည်း ကျွန်တော်gtalk မှာadd ထားတယ်ဗျ။ တဖွဲ့သားလုံးပျော်ရွှင်ချမ်းမြေကပါစေခင်ဗျာ :) cbox မှာရေးလို့မရလို့ဗျ ဘန်းထားတယ်တဲ့ :)